Posted by Tranquillus | Jan 6, 2020 | Tababarka internetka
Smartnskilled wuxuu ku siinayaa fursad aad ku raacdo tababbarka khadka tooska ah ee ku habboon xawaarahaaga iyo baahiyahaaga. Waxyaabaha ku jira qaabka fiidiyowga ee goobta ku jira waa tiro badan yihiin (qiyaastii 3714) waxayna ku habboonaan doonaan dhammaan kuwa jeclaan lahaa inay bartaan aqoon dheeraad ah.
Waxa ay Smartnskilled bixisaa
SmartnSkilled waxay bixisaa koorsooyin tababaro kala duwan oo ku habboon noocyada kala duwan ee shakhsiyaadka. Haddii aad rabto inaad horumariso meheraddaada ama aad u baahan tahay shahaado, madalku wuxuu leeyahay qalab badan oo kaa caawin kara. Madalku wuxuu bixiyaa tababarka dhinacyo kala duwan sida xisaabaadka, IT, suuq geynta, iwm.
Faa'iidada ay leedahay shirkadda 'SmartnSkilled' waa in aad ku horumarin karto xawaarahaaga, taas oo ku xidhan hadba sida aad u jirto. Marka lagu daro fiidiyowyada, kuwaas oo ah dariiqa deg degga ah ee wax lagu barto, waxaa sidoo kale kugu wehelin kara tababbare khibrad leh oo leh xirfadaha wax barista. Kuwa dambe ayaa ka jawaabi kara su'aalahaaga oo dhan si shaki kaaga jiro maskaxdaada.
Booska is-weydaarsiga ayaa laga heli karaa masraxa si loogu oggolaado bartayaasha ka diiwaangashan goobta inay la wadaagaan su'aalahooda midba midka kale ama tababarayaasha. Laylisyada waxay bixiyaan kiisas wax ku ool ah oo hadda jira. Dhamaadka kooras kasta, imtixaanka qiimaynta oo leh shahaadada guusha ayaa la siiyaa xubnaha.
Kuwa ku jira geeddi-socodka dib u noqoshada, waxaa suuragal ah inay ka faa'iideystaan ​​tababarka ay bixiyeen ganacsatada firfircoon. Waxay sidoo kale awood u yeelan doonaan inay ku siiyaan xiisado tababareed oo gaar ahaaneed waxayna ku siin karaan xaaladaha nolosha dhabta ah.
READ Sidee loo hagaajin karaa boggaaga LinkedIn si sahal ah Video2Brain?
Tababbarka la heli karo
Si aad u aragto tababbarka iyo casharada la heli karo, booqo buugga-hayaha buugga. Ku dhawaad ​​113 koorso tababar ah oo ku saabsan mowduucyo kala duwan (xafiis otomaatig, barnaamij, maamul, ganacsi, iwm.) Ayaa la bixin doonaa. Muddada tababarka, qiimaheeda iyo tababaraha shaqsiyeed ee jira ayaa isla markiiba la arki doonaa.
Adoo gujinaya mid ka mid ah fadhiyada tababarka, waxaad arki kartaa fiidiyow bilaash ah oo laga soo qaadanayo tababarka. Tani waxay kuu noqon doontaa dariiqa aad ku arki karto haddii tababarku kor u qaado qodobbada muhiimka ah ee aad raadineysay. Markaad iibsato tababarkaaga, waxaad yeelan doontaa marin aan xad lahayn.
Haddii aad rabto inaad lacag keydiso, waxaad dooran kartaa xirmooyin isu keena koorsooyin dhowr tababar ah oo isku mowduuc ah. Waxaad haysataa tusaale ahaan Microsoft Office 2016 pack kaas oo kuu ogolaanaya inaad barato aasaaska Ereyga, Excel, PowerPoint iyo Muuqaalka 2016. Waxaa sidoo kale jira xirmo loogu talagalay qorista iyadoon khaladaad higaadin la qorin, la isugu koobayo bilowga, khabiirka iyo heerka sare. .
Isticmaalka barnaamijka SmartnSkilled, way kuu fududaan doontaa inaad hesho waqti aad ugu hurto tababarkaaga. Waxaad isticmaali kartaa taleefankaaga casriga ah isla marka aad haysato wakhti firaaqo ah oo aad naftaada ugu quusto waxbarashadaada. Waa inaad ogaataa in tababarka la heli karo 24 saacadood maalintii, 24 maalmood usbuucii.
Barnaamijka, waxaad gali kartaa ama iska qori kartaa SmartnSkilled adigoo adeegsanaya Facebook, Google+ iyo Linkedin. Noocaan mobilada ah wuxuu sidoo kale kuu oggolaanayaa inaad gasho buugga macluumaadka ee boosteejada iyo inaad iibsato tababbarka ama rukumashada. Intaa waxaa dheer, codsigu si otomaatig ah ayuu ula shaqeeyaa goobta.
Adigoo adeegsanaya istiraatiijiyadda ergonomic-ka, kuma adkaan doontid helitaanka barnaamijyada SmartnSkilled. Barnaamijku wuxuu leeyahay taariikh iyo astaamo kuu oggolaanaya inaad si fudud u hesho fiidiyaha aad ugu jeceshahay. Mashiinka raadinta ee uu bixiyo barnaamijku waa mid wax ku ool ah wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad ku dhaqaaqdo baaritaanno badan oo la bartilmaameedsado.
Macaamiisha ka horreysa tijaabo bilaash ah
Ka hor intaadan iska qorin rukummada bogga, waxaad isku dayi kartaa bilaash 24 saacadood. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho fikradda koowaad ee masraxa. Markaad iska diiwaangeliso bilaash, waxaad heli doontaa xaddidnaan aan dhammaan tababbarka iyo kheyraadka ay ku deeqeen goobta. Si kastaba ha noqotee, waxyaabaha dheeraadka ah (VM, buugaagta, iwm) ayaa la xisaabin doonaa.
Haddii aad ku qanacsan tahay qibradan 24-ka saacadood ee ugu horreeya, waxaad u beddelan kartaa rukumad. Marka hore waxaa jira 30 maalmood oo la diiwaangelinayo. Dambe wuxuu ku siinayaa isla mudnaanta ay leedahay tijaabada bilaashka ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad heli doontaa waqti badan oo aad kula xiriirto xubnaha kale iyo tababarayaasha ama aad iska diiwaangeliso imtixaanka shahaadada.
Kadib waxaad haysataa rukummada 90-ka maalmood ee rubaclaha ah. Gaar ahaanshahan ayaa ah inuu kuu oggolaanayo inaad ka faa'iideysato hoos u dhac 30% ah oo dheeraad ah oo lagu bixiyo. Si aad ugu raaxaysato dhimis 40% ah, waa inaad doorataa liiska sanadka badhkiis (180 maalmood). Ugu dambeyntiina, si loo helo dhimis 50% ah, dooro rukunka sannadlaha ah (365 maalmood).
Lacagta ugu yar ee 30-maalin waa 24,9 euro (0,83 euro / maalin) halka 1-da sano ah ay ku baxeyso 216 euro (0,6 euro / maalin). Macna ma laha rukunka aad doorato, waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho barnaamijka SmartnSkilled oo ma jiri doonto cusbooneysiin toos ah. Bixinta lacag bixinta, waxaad ku sameyn kartaa wareejinta bangiga, isticmaal kaarka bangiga (Kaarka amaahda, MasterCard, Visa…) ama adoo adeegsanaya PayPal.
READ Sheekada Weelearn: Muuqaalka-Baro
Smartnskilled: goobta tababarka khadka tooska ah ee kulmaan dhammaan baahiyaha 25-Abriil, 2020Tranquillus
horeAlphorm, IT tababarka ayaa hadda laga heli karaa khadka tooska ah
socdaKala fogow la shaqee TeamViewer inta lagu jiro shaqo joojinta